トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Features - ona kuburikidza nenzira Horukon zvenguva yokuvira nguva
In Horukon kubatwa, Yave kukwanisa kuisa bhora kunze Horukon. Pakati pavo, mukuru naro, zvenguva ezvinhu, ndechokuti low-yakatarwa uye zvitatu mhando varipo. In, pakati yakatarwa, tinoda chii kuenda kutarira zvichazoitika. Zvenguva akagadzirwa
Horukon kwave chinonetsa kuona kuburikidza ari 3 marudzi pazviruva.
Sezvo chikonzero, imi zvinhu zvakadai nokuti sangano akafanana yakakwirira yakatarwa panguva kunogona kuonekwa. Somuenzaniso, muna mukuru-yakatarwa, asi zvakanga kuti pane pfungwa kuti bhora iri vakanwa kupinda kutanga, ndizvo saka zvinhu zvakafanana saizvozvo pakati apo pakuvira kunoitika.
zvakare, uye mananara kuti zvava zvinonetsa kuderedza bhora rokumusoro tireyi, kwakawedzerwawo pamwe zvakare kuitika pakati yakatarwa Fani ruchigona mumigwagwa kuburikidza. Chokwadi ndiro musiyano mukuru marongero uye zvenguva ezvinhu, masvika chokuti kunyanya guru.
Zvisinei, isu kufanana kunewo nzvimbo yakasiyana padunhu marongero uye zvenguva pakuvira.
izvozvo, Kunenge ndechokuti nhamba givin kuti jackpot zvakasiyana. Kana mukuru ezvinhu, mukati boka, iyo akasarudzwa muna chisarudzo boka, asi kwave nokurova guru rinowanika mumwe pashure pomumwe, pane nyaya zvenguva ezvinhu, uyewo richakunda boka, kubva mana mukati mapoka mashanu, anenge mumwe chete zvinhu kunge zvichiitika kuti jackpot haina kuvharwa.
ari dzidziso iyi, pakati vaya kusimbisa kuti Horukon kubatwa, nekuti ikoko vaya pfungwa yakasiyana, handizivi pachena. Sezvo chokwadi kuti vamwe vanhu vane kuti mhando mafungiro, edza kuti panotaurwa somumwe mafungiro.
izvi mananara chichava chinhu kuti kuitika pakati kurongwa.
zvakadaro, nokuda kurova aiming patafura kuti kunoitika nguva dzose, kunyange pakati yakatarwa kwave akati zvinobvira kuzochera zvikuru raparadza pachine.
Zvisinei, nokuti kubatwa achishandisa Horukon, vane pfungwa dzakasiyana pakati pevaya kohomedza ichi Ichokwadiwo pane kakawanda nyaya kuti. Sezvo kuri zvishoma zvakanyorwa pamusoro pakati yakatarwa apo muna
mambure, nezvimwewo, zvikurukuru panotaurwa dzakakwirira marongero uye Chiitiko chinhu chakafanana, zvichava chokuti pfungwa yakanaka kutarisa nhamba kana zvakadai pamusoro jackpot Ndinofunga.